Fitodika mpamari-toe-javatra, Matoanteny mitampody, Matoanteny, Matoanteny mpanampy, Fiakarani Kristy any an-danitra, Fankalazana ny Fiakarani Jesosy, Han Song
Ny fitodika mpamari-toe-javatra dia fitodiky ny fehezanteny izay misy lazaina mitana tsinjara asa toe-javatra sy entimilaza aminny endrika hafa fa tsy mitovy aminny anny matoanteny manano. Io lazaina toe-javatra io dia fameno mpamari-toe-javatra ...
Ny matoanteny mitampody, araka ny fitsipiteny, dia matoanteny ahitana mpisolo tena fameno miaraka aminy izay mitovy laharana amin ny mpisolo tena mitana ny anjara asa lazaina na lafika ao amin ny fehezanteny misy azy. Io mpisolo tena fameno io di ...
Ny matoanteny dia teny izay ampiasaina ao aminny fehezanteny na fehezankevitra mba hilazana asa na toetra na fifandraisana na fisehoan-javatra ka mety miovaova endrika, filaza, fanehoan-javatra sns. arakaraka ny fiteny), nefa misy koa ny fiteny t ...
Ny matoanteny mpanampy dia matoanteny ampiasaina miaraka aminny endriky ny matoanteny toy ny ova-matoanteny mba hanehoana filazam-potoana na fanehoan-javatra ao aminny fiteny sasany. Ao aminny fiteny frantsay dia ampiasaina ho matoanteny mpanampy ...
Ny fiakarani Jesosy tany an-danitra na fiakarani Kristy tany an-danitra, izay indraindray hafohezina aminny hoe Fiakarana, dia ny fialani Jesosy Kristy avy ety an-tany any an-danitra ho any aminAndriamanitra. Ao aminny lovantsofina kristiana, ara ...
Ny Fiakarani Jesosy na Fiakarani Jesoa na Fiakarana fotsiny na Andro niakarana dia fety kristiana ahatsiarovana sy ankalazana ny andro niakarani Jesosy Kristy any an-danitra efapolo andro aorianny Paska ary folo andro alohanny fankalazana ny nila ...
Ny fanandroana malagasy dia endriky ny fanandroana ataon ny mpanandro malagasy izay andinihany sy ampiharany ny fifandraisan ny fotoana ahaterahan ny olona iray na ny fotoana ahatanterahan ny zavatra iray andaniny, amin ny toerana sy ny toetran i ...
Aminny heviny mahazatra, ny teny dia feo na soratra mitandahatra, ka manome heviny sy manana ny dikany. Ny fiavahanny teny roa samy hafa dia sarahinny mpanelanelana, izay matetika eba na malalaka hita aminny soratra, ary fiatoana kely heno aminny ...
Ny anjara asa dia karazam-pifandraisana sy fifampiakinana misy eo amin ny teny na andian-teny sy ny teny na andian-teny fototra mikambana ao amin ny andian-teny lehibe kokoa. Ireto ny anjara asa mateti-pitranga ao amin ny fehezanteny: ny entimila ...
Ny mpamari-toetra dia teny ampiraisina aminny anarana na atao entimilaza mba hanambaràna ny toetranny zavatra tondroina aminilay anarana na ny toetranny zavatra tondroina aminny lazaina. Zana-tsokajinny mpamaritra ny mpamari-toetra. Ao aminny feh ...
Ny tambinteny dia teny izay natao hanova na hanampy hevitra ny teny na andian-teny hafa toy ny matoanteny, ny mpamari-toetra, ny tambinteny hafa, ny mpampiankin-teny, ny fehezankevitra, ny fehezanteny sns ka ny hevitra ambarany aminizany dia mety ...
Ny mpampitohy dia teny mampifandray teny na andian-teny roa na maro ao amin ny andian-teny lehibe kokoa na ny fehezankevitra na ny fehezanteny iray. Misy karazany roa ny mpampitohy dia ny mpampitohy teny sy ny mpampitohy fehezankevitra. Ny mpampi ...
Ny mpanampy dia na sokajin-teny na anjara asa, arakaraka ny fiteny na ny mpahay teny. Aminny fitsipiteny mahazatra ao aminireo fiteny eoropeana sy ny fiteny hafa naka tahaka ny fitsipiteniny dia ao aminny sokajinny matoanteny no ahitana ny mpanam ...
Ny mpamaritra tompon - javatra dia teny ampiraisina aminny anarana mba hilazana ny fifadraisanny olona na zavatra tondroinio anarana io aminny olona na zavatra hafa manam-pifandraisana manokana aminy nefa tsy tononina ny anaranity farany. Tsy voa ...
Ny filaza isa dia marika aminny teny izay milaza na tokana na maro sns ny zavatra tondroina aminio teny io na aminny teny mifandray aminy. Arakaraka ny fiteny no mety hahitana filaza isa aminny sokajin-teny iray ka ny fahita matetika ao aminireo ...
Ny fitodika fitaovana na dia fitodika asahonny endriky ny matoanteny ao aminny fehezanteny izay ahitana lazaina manondro ny zavatra ampiasaina hanatanterahana ny asa. Ny lazaina aminny fehezanteny mitodika aminny fitaovana dia mitana ny anjara as ...
Ny fitodika iharana na fitodika zoina iharana ao aminny fitsipiteny sy haiteny malagasy araka anjara asa dia ny fitodiky ny fehezanteny ahitana vaniny roa fara-fahakeliny ka ny matoanteny dia misy tovana - ina, -ana, na tsirinteny sara-droa ha-. ...
Ny fameno zoina dia anjara asa fameno ao aminny fehezanteny izay milaza ny olona na biby na zavatra hafa iantefanny asa tanterahinny olona na biby na zavatra hafa tondroinny teny atao lazaina. Aminny ankapobeny dia mampiavaka ny fameno zoina ny t ...
Ny fameno mpamari-toe-javatra dia anjara asa fameno ao aminny fehezankevitra na ny fehezanteny izay manondro ny "toe-javatra" izay matetika azo afindrandrafindra toerana sady azo foanana, nefa tsy manakorontana ny rafitry ny fehezanteny izany, ka ...
Ny fameno mpamari-toe-javatra na fameno mpamari-toe-javatra milaza toerana dia anjara asa fameno mpamari-toe-javatra izay manondro ny toerana ahatanterahana ny asa na ny toetra ambaranny enti-milaza. Aminny fiteny sasany dia matetika ialohavana m ...
Ao aminny haiteny sy ny fitsipiteny, ny mpanao dia anjara asa ara-kevitry ny teny manondro ny olona na zavatra manatanteraka ny asa ambaranny matoanteny ao aminny fehezanteny na fehezankevitra. Tsy afangaro aminny lazaina ny mpanao, satria ny laz ...
Ny toe-javatra na mpamari-toe-javatra, aminny fitsipiteny na ny haiteny dia ny teny na andian-teny izay misahana anjara asa ara-keviteny tsy tena ilainny matoanteny hameno ny heviny, tsy tahaka ny zoina. Aminny fiteny maro dia misahana ny anjara ...
Ny fameno dia anjara asanny teny izay maneho ny fiankinanio teny io aminny teny na andian-teny iray hafa ao anaty fehezanteny. Ny andian-teny resahina eto dia mety ho tarika na fehezankevitra. Misy karazany maro, arakaraka ny hevitrilay fiankinan ...
I Iràna Lehibe na ny Tontolo iraniana na Persia Lehibe na Persa Lehibe dia ny faritra izay itenenana ireo fiteny iraniana sy ireo faritra nikambana tao aminny Persia na ny Empira persiana. Misy ny mpanoratra mampiasa teny azo adika aminny hoe Kôn ...
Ny kolontsaina ao amin ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô, izay ahitana mponina miisa any amin ny 86 000 000, dia ahafaha-mitaratra ny fahasamihafan ireo foko anjatony maro ao amin io firenana io sy ny fomba amam-panaony. Nanomboka tamin ny fiafa ...
Ny Firenena Mikambana Misahana ny Fanabeazana sy ny Siansa ary ny Kolontsaina na UNESCO dia fikambanana iraisam-pirenena sampananny Firenena Mikambana. Hoy ny UNESCO ny tanjona dia ny hanampy foana ny fiadanana sy ny filaminana. Tokony hanao izan ...
Ny dragona dia zavaboary manan-tantara lehibe sy bibilava hita any aminny tantaram-piainanny kolontsaina maro manerantany. Ny finoana ny dragona dia samy hafa be aminny faritra rehetra, fa ny dragona aminny kolontsaina andrefana hatraminny taona ...
Ny Azteka dia kolontsaina mesoamerikana izay niroborobo tany afovoani Mexico taminny vanim-potoana taorianny kilasy hatraminny taona 1300 ka hatraminny 1521. Ny vahoaka Azteka dia nahitana foko isan-karazany tao afovoani Mexico, indrindra ireo vo ...
Ny fiteny grika kôine na grika kôine na grikanny Baiboly dia endriky ny fiteny grika izay notenenin ny olona tamin ny vanimpotoana sy tontolo nanjakan ny kolontsaina grika ary nampanarahim-penitra tamin ny vanimpotoana nampiroborobo ny kolontsain ...
Ny zana-kôntinenta indiana dia faritra ara-jeôgrafia ao Azia Atsimo, mirefy 4 500 000 km 2 any ho any, izay ahitana an i India, i Pakistàna, i Bangladesy, i Nepaly, i Botàna, i Srilanka ary ireo nosy Maldiva sy ampahan-tanin izy ireo sy ampahan-t ...
Ny vondrom-poko na foko dia vondron olona mihevitra ny tenany ho iray razana, iray tantara sy fedrà, iray kolontsaina, iray fiteny na fitenim-paritra, iray fomba fiainana. Mety ho ny sasany amin ireo singa famaritana ireo ihany no amaritana ny fo ...